Zavvi နှင့်အတူ LEGO Technic 120 Lamborghini Sián FKP 42115 တွင်ပေါင် ၁၂၀ လောက်သက်သာသည်
20 / 05 / 2021 20 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 216 Views စာ0မှတ်ချက် 42115 Lamborghini Sián FKP ၃၇, City, အဖေများနေ့, Friends, Lego, Lego CIty, Lego Friends, Lego Ninjago, Lego Speed Champions, Lego Technic, Ninjago, စျေးဝယ်, Speed Champions, နည်းပညာ, Zavvi
ဘဏ်ကိုမချိုးဖောက်ဘဲစူပါကားကိုတည်ဆောက်ရန်စိတ်ကူးလား။ သတင်းကောင်း: Zavvi တစ်ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူနိုင်သော£ 120 ခေါက်ခဲ့သည် Lego နည်းပညာ 42115 Lamborghini Sián FKP ၃၇.
၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထင်ရှားကျော်ကြားသော ၃၅% လျှော့စျေးကိုကိုယ်စားပြုသည် နည်းပညာ supercar, ဒါမှမဟုတ် - ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင် - အလွန်ကောင်းတဲ့သဘောတူညီချက်။ 3,696 အပိုင်းပိုင်း, ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းထုံးအစိမ်းရောင် Lego Lambo တွင်ရှစ်မြန်နှုန်းဂီယာအုံ၊ ရှေ့နှင့်နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်နှင့်အလုပ်လုပ်သောစတီယာရင်တို့ပါ ၀ င်သည်။
ဘာကြောင့်လဲအကြောင်းပိုဖတ်နိူင်သည် 42115 Lamborghini Sián FKP ၃၇ များအတွက်မရှိမဖြစ်ဝယ်ယူရန်ဖြစ်ပါတယ် နည်းပညာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေ အသေးစိတ်သုံးသပ်မှု, ဒါပေမယ့်ဓာတ်ဆီခေါင်းစဉ်ကဒီကားကိုအကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်, အထူးလျှော့စျေးရရှိနိုင်နေချိန်မှာကျဆင်းနေတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ Lego ငါတို့ခဏတစ်ဖြုတ်တွေ့ခဲ့ကြပြီလေ။
အဲဒါတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး Lego မော်တော်ယာဉ် Zavvi ကားများ၊ ထရပ်ကားများနှင့်အခြားအရာများစွာကိုလတ်တလောတွင်လျှော့စျေးများပေးလျက်ရှိသည် နည်းပညာ, CITY, Speed Champions, Ninjago နှင့် Friends။ သင်မီးမောင်းထိုးပြအနည်းငယ်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည် ဒီမှာဒါမှမဟုတ် Zavvi မှတဆင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ စာရင်းအပြည့်အစုံပါ။
အပေါ် 35% လျှော့စျေးအပါအဝင်ဤအရာအလုံးစုံကမ်းလှမ်းမှု 42115 Lamborghini Sián FKP ၃၇, ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိခမညျးတျောနေ့၏ပွဲအတွက်ပြေးပါလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားရဲ့အဘိုးအိုကို Lambo ဖမ်းတာထက်အများကြီးပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်၊ Lego တဦးတည်း။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego မှ Zavvi ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစုံတယောက်သောသူသည်သုံးနိုင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← Zavvi သည် 'Drive What You Love' စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင် LEGO အစုံအလင်ကိုအထူးလျှော့ချသည်
Lego ၏ပထမဆုံးပုံရိပ် Friends ကော်ဖီခွက် GWP →